कतै तपाईले पढ्न छुटाउनु त भएन् संसारभर लोकप्रिय मयुर र कौवाको कथा ! जसले तपाई हाम्रो आँखा खोलिदिन्छ - Sudur Khabar
कतै तपाईले पढ्न छुटाउनु त भएन् संसारभर लोकप्रिय मयुर र कौवाको कथा ! जसले तपाई हाम्रो आँखा खोलिदिन्छ
प्रकाशित मिति : १२ असार २०७५, मंगलवार १७:३७
यो कथाले निकै राम्रो शिक्षा दिएको छ । कौवा सोच्थ्यो हाँस सबैभन्दा खुसी छ, हाँसलाई लाग्थ्यो म त के हो र त्यो सुगा पो खुसी छ, उता सुगा मयूरको सुन्दरता देखेर मोहित थियो । उसलाई मयूर नै सबैभन्दा खुसी छ जस्तो लाग्थ्यो । तर मयूरको नजरमा कौवा सबैभन्दा खुसी थियो । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने अरुसँगको तुलनाले आफूलाई सधैँ दु:खी तुल्याउँछ । त्यसैले आफूसँग जे छ त्यसमा खुसी हुन सिक्नुहोस् । सारा समस्या र पीडाहरु विस्तारै हल हुँदै जानेछन् ।